Fampiharana - Zhejiang Estar Mechanical Co., Ltd
CFB vokatra fampiharana
Ireto manaraka ireto ny sasany amin'ireo manokana fampiharana ny CFB bearings
Noho ny fitambaran'ny fananana ara-nofo sy ny fampisehoana, CFB vokatra efa be mpampiasa kokoa noho ny olon-tsotra sy nampirisika tena-lubricating bearings. Manify-mimanda rafitra, habeny kely, hazavana lanjany, mora ampiasaina UE hasehonao. Mifototra amin'ny ara-nofo ny fananana anaovan'ireo-mahatohitra sosona PTFE CF fifangaroan'ny vokatra ho an'ny fikojakojana sarotra tsy azo refueled na sarotra refuel, tsy misy solika lubrication sy menaka tsy lubrication fotoana. Nandritra ny fampiasana, ny PTFE amin'ny teny mifangaro ny famindrana sarimihetsika izay miaro ny grindstone lavaka tsy manaikitra. PTFE blends manolotra anaovan'ireo tsara fanoherana sy iva coefficient ny friction, ary koa ny tony fihetsika elasto-plasticity, izay mizara ny adin-tsaina manerana ny fifandraisana malalaka ambonin'ny sy mampitombo ny enta-mavesatra amin 'izany fahafahana ny EU nitondra vokatra (jereo). Noho izany, EU vokatra no tsara noho ny miodina, mitsingevaheva, axial sliding sy ny fotoana hafa.
Mahazatra fampiharana ao amin'ny orinasa ity dia ahitana:
Throttle, novakiny, clutch pedal, fitaratra fanovana rafitra, wiper, varavarankely hanandratra rafitra, sunroof rafitra, joystick, varavarana miankina varavarana hidin-trano, fehikibo miaro amin'ny loza tensioning rafitra, seza fanovana rafitra, Carburetor, vatany, miankina, marindrano tsorakazo sy ny baolina lohany, throttle, mamily, mamily, mavo vy sy ny sisa.
Milina fambolena sy ny sakafo milina
Traktera, manambatra ny mpijinja, balers (hay, mololo, sns); balers, fitaovana fikarakarana hena, ovy mpijinja, sprayers, vary dryers, namboly zavamaniry, labiera fitaovana, sns
Fanorenana milina, ny fitaterana milina
Hydraulic excavateurs, hydraulic manandratra, simenitra mixers, fikororohana Lift kamiao, hydraulic cylinders, fehin-kibo tensioners, fanentanana an-tsary, rihitra kamiao, pallet forklifts, pneumatic manandratra, ny fizotr'ireto bulldozers, escalators, Rano fitaovana mba hampahahendry, lafiny Loading sy mampidina entana avy milina.
Household fitaovana, fitaovana ara-barotra, fitaovana hopitaly
Air conditioners, Mpitroka ny loto ao, dishwashers, milina fanjairana, milina fanasan-damba, vata fampangatsiahana, photocopiers, pirinty, skanera namany Sary fanodinana rafitra, taratasy manavaka fitaovana, nify fitaovana, fitaovana X-ray, miasa latabatra sy ny toy izany.
Bisikileta, môtô, fitaovana, etona kofehy fanjairana Machine, reciprocating tsofa, Gerong milina, damba milina, knitting milina, bokotra milina, fonosana rafitra, famantsihana fitaovana milina, fitaovana orinasa mpamokatra entana fitaratra.
CFB hasehonao dia matetika hirotsaka ho mitsitaitaika fandidiana sy ny sisin-tanin'i lubrication tontolo iainana, indrindra fa ny niteraka lavaka hasehonao famolavolana, tsara fa tsy mitohy na miverimberina refueling fotoana, fa amin'ny tsy lubricating toe-javatra, CFB Ny lavan'ny hasehonao miankina amin'ny jaza, ambonin'ny hafainganam-pandeha , ny mari-pana sy ny Ambient manokana fifandraisana hafa. Mandritra izany fotoana izany, ao anaty ambonin'ny sosona ny hasehonao plastika azo sisa ao an-koronosy dingana alohan'ny namorona, dia azo tsinjaraina any an-seza lavaka ho tsara kokoa ny habeny fivoriana.
Gear paompy, paompy, piston paompy, baolina valves, lolo valves, fampifangaroana valves, fanaraha-maso valves, reciprocating rivotra compressor, hydraulic freins, centrifugal compressors, hydraulic cylinders.